3 echiche iji mepụta ụdị mara mma maka azụmaahịa gị n'ịntanetị | ECommerce ozi ọma
3 echiche iji mepụta ụdị mara mma maka azụmaahịa gị n'ịntanetị
Maka ụdị ntanetị iji nwee ihe ịga nke ọma, ha ga-ebu ụzọ banye site na anya. Ma ọ bụghị ya, ọ bụghị naanị na data ga-agwụ gị, mana ha ga-ahụ ya dị ka ịnwa ịnweta ozi nzuzo nke ọtụtụ ndị na-adịghị njikere inye.
Ajụjụ iwe, okirikiri nhọrọ ukwuu, lousy imewe ... ma ọ bụrụ na ị chọrọ mepụta ụdị mara mma maka azụmaahịa gị n'ịntanetị, akwụsịkwala ịgụ ihe anyị kwadebeere gị; enwere ike na site na nke a ị ga-emerịrị ihe ịga nke ọma na ịntanetị.
1 Kedu ụdị ndị ahụ?
2 Ọrụ nke ụdị
2.1 Mee ka ndị ahịa guzosie ike
2.2 Ree ihe
2.3 Debanye aha maka ire ụtọ
2.4 Rịọ ozi ndị ọzọ
2.5 Chịkọta data
3 Akụkụ kachasị mkpa nke ụdị ntanetị
3.1 Formsdị dị mkpụmkpụ, dị mkpụmkpụ
3.2 Nye ihe nloghachi
3.3 Kọwaa nke ọma ihe ịchọrọ ụdị data ahụ
4 Echiche kachasị mma maka ụdị ntanetị nke na-enye gị obi
4.1 Chọọ maka aghụghọ na-adọta uche
4.2 Ndabere dị mkpa
4.3 N’oge ịntanetị, aka ọdịde ga-apụta ìhè
Kedu ụdị ndị ahụ?
Onlinedị dị n'ịntanetị bụ ihe akụrụngwa kachasị eji anakọta ozi sitere na ndị ọbịa gaa na ibe. Ebumnuche bụ ka ndị a zaa usoro nke ajụjụ na data ahụ ghọrọ akụkụ nke nchekwa data "nzuzo" nke azụmahịa ahụ n'onwe ya.
Ọrụ nke ụdị
Mgbe ị na-eji ụdị, ọrụ ya edoghị anya. Ma ọ bụghị n'ihi na ị maghị otu esi eji ya nke ọma, mana n'ihi na ọ nwere ọtụtụ n'ime ha.
N'ezie, enwere ike iji ụdị:
Mee ka ndị ahịa guzosie ike
Dịka ọmụmaatụ, ka onye ọrụ wee denye aha ya ma nwee data ya iji zigara ya isiokwu, onyinye, ego ...
O doro anya na ị banyela na peeji nke kpọsaa ngwaahịa na, kama ịnye gị njikọ ahụ, o nyere gị ụdị ha ga-akpọ gị. Ma ọ bụ ịga n'ụlọ gị iji gosi gị ngwaahịa ahụ, ma ọ bụ mee oge ọhụhụ.
Ee, ọ bụkwa otu n'ime ọrụ nke ụdị.
Debanye aha maka ire ụtọ
Ọtụtụ ndị mmadụ na-agba ọsọ raffles na, maka nke a, ị ga-ahapụrịrị data gị. Mana nke ahụ bụkwa ihe kpatara ndị mmadụ ji mepụta akaụntụ ndị ọzọ (nke mere na spam na ọdịnaya niile ha achọghị achọghị ewute ha).
Ha bụ ndị nkịtị, dịka ọmụmaatụ, na ọzụzụ. Mgbe ị hụrụ ụzọ na-amasị gị, kama ịgwa gị onye na-akụzi ya, ha kụrụ ụdị nke ị ga-edejupụta ka ha wee kpọọ gị na ekwentị.
Ruo oge ụfọdụ, ọtụtụ ụmụ akwụkwọ na-eji ụdị ahụ eme nyocha. Ha bụ Yiri nke ị hụrụ n'okporo ámá na ha chọrọ ka ị dejupụta a nnyocha e mere (ma ọ bụ mgbe ha na-akpọ gị na ekwentị). Dabere na data ndị a, ha na-emepe echiche.
Mana n'ime azụmaahịa ọnlaịnụ mmadụ nwere ike iche n'echiche a, dịka ọmụmaatụ, na ịme nyocha banyere ọrụ ahụ, ọ bụrụ na enwere ihe iji melite, wdg.
Akụkụ kachasị mkpa nke ụdị ntanetị
El Ebumnuche nke ụdị ntanetị bụ iji mejupụta ya. Were ya na ị nọ na mmemme, jiri ezigbo peeji nke ibe ha, nke ọ bụla bụ ụdị ndị mmadụ. Ihe ngosi a emegharịghị otu peeji, ya bụ, ndị mmadụ na-ahụ ya, na-edebe ajụjụ ọ ga-aza, ma hapụ ya. Ngụkọta ọdịda.
Ọ bụrụ n’ịchọghị ka otu ihe ahụ mee na ntanetị gị, ịchọrọ echiche ndị a anyị chọrọ. Ha agaghị ebu amụma banyere ihe ịga nke ọma, mana ị ga-eme ihe niile enwere ike ime ka ha rụọ ọrụ, ndị ọzọ dabere na ihe niile ụdị ahụ gụnyere ka ị kwenye ha ịhapụ data ha.
Ya mere, buru ihe ndị a n'uche:
Formsdị dị mkpụmkpụ, dị mkpụmkpụ
Ihe kachasị njọ ị nwere ike ime n'ụdị bụ ịjụ ọtụtụ ajụjụ. Ka ị na-etinyekwu ya, ka ọ na-esikwuru onye ahụ ike ịza ya n'ihi ihe abụọ: otu, ọ nwere ike chee na ọ ga-ewe ogologo oge iji mejupụta ya (na oge ya bụ ego, yabụ na ọ gaghị efufu ya na gị). Ọ ga-abụcha na ha ga-achọ ime ya, naanị ma ọ bụrụ na ị kwenyesiri ike na ha tupu oge a; na abụọ, na ọ bụrụ na ị jụọ maka oke data, ha agaghi eji anya oma hu gi ihe omuma a (N'ezie, ha agaghị aza ma ọ bụ hapụ peeji gị ozugbo).
Gịnị ka ị ga-eme mgbe ahụ? Chọọ naanị data ịchọrọ n'ezie. Ọ dịghị ihe ọzọ.
Nye ihe nloghachi
Ozi bụ ihe bara uru bara uru. Na-arịọ mmadụ ka o nye gị ozi nkeonwe ha na nke onwe ha, gịnịkwa ka ọ na-enweta na ya? Ihe kachasị dị nchebe bụ na ị kpọrọ ya, dee ya na n'ikpeazụ ọ ga-ehichapụ onwe ya na ndepụta gị ma ọ bụrụ na ọ nweghị mmasị. Yabụ, n'ọnọdụ data ahụ, gịnị kpatara na ị gaghị enye ya ihe mkpali? Otu ebook, a budata, a ngosi, ọbụna obere nkọwa iji nyere gị aka.
Kọwaa nke ọma ihe ịchọrọ ụdị data ahụ
Ọ dị ka nzuzu, mana n'ezie Izo uzo nwere ike inyere gi aka na ahia gi. N’iburu n’uche na ọtụtụ ụlọ ọrụ “na-ere” ozi nke onye ọrụ, na-eme ka ihe ị na-ajụ ha doo anya ga-enyere ha aka ịtụkwasị gị obi.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ka ha zigara ha ozi, gịnị ma ị gwa ha? Gwa ha ugboro ole ị ga-eme ya, ụdị email na ozi niile ha chọrọ ịma. Ọ bụrụ na ha hụ ka ị na-akọwara ha ihe niile, ị nwere ike ịga nke ọma na mpempe akwụkwọ ahụ.
Echiche kachasị mma maka ụdị ntanetị nke na-enye gị obi
Ugbu a ị matara ụdị ntanetị dị ntakịrị, lee ụfọdụ echiche iji mee ka ha maa mma ma gbaa ndị ọrụ ume ịza ha:
Chọọ maka aghụghọ na-adọta uche
Atụmatụ na-agwụ anyị ike, yabụ, dabere na weebụsaịtị gị, ị nwere ike ịchọta otu nke bụ akụkụ nke eserese, ihe atụ, wdg.
Iji maa atụ, osisi ebe ngalaba ọ bụla bụ ajụjụ na mpempe akwụkwọ. Agba ị ga - enweta ụdị a na-ezobe na ọ dịghị ka ụdị n'onwe ya, ma ọ dị maka ndị ọrụ iji.
Ndabere dị mkpa
Were ya na ị bụ ọkwa nkà na ịchọrọ ndị ahịa n'ọdịnihu ịhapụ gị ozi ahụ. Ọfọn, ị nwere ike ịme ka ndabere dị ka a ga - asị na ọ nwere ederede osisi. Ma ọ bụ igbe osisi dị ka ngwugwu. Mgbe ụfọdụ, iche echiche banyere onye nnọchianya kachasị nke azụmahịa ahụ na-enyere gị aka ịmepụta ụdị izizi.
N’oge ịntanetị, aka ọdịde ga-apụta ìhè
Oge ọ bụla anyị na-ejikarị ede ihe site na kọmputa, mobile ... Nnọọ mmadụ ole na ole ka nwere ọ ofụ nke iji aka dee, ma ọ bụ idetu ihe. Na ,ntanetị, nke a bụ obere ihe a na-ahụ anya, mana gịnị ma ọ bụrụ na iji ya adọta uche n'ụdị gị?
Ị nwere ike nzọ na ntụrụndụ na-atọ ọchị ma na-achọsi ike ka ọ dị ka aka ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » 3 echiche iji mepụta ụdị mara mma maka azụmaahịa gị n'ịntanetị
Cryptocurrencies na usoro ugwo ohuru
Ndụmọdụ 6 maka ezigbo nkwado eCommerce